Nharembozha uye Hwendefa Kushambadzira Blog | Martech Zone
Kushambadzira kwenhare, kushambadzira kweSMS, nharembozha, uye zvigadzirwa zvetekinoroji zvigadzirwa, masevhisi, uye nhau dzevashambadzi pa Martech Zone
Kushambadzira Tekinoroji Ongororo & Kuedzwa Content Marketing CRM uye Dhata Mapuratifomu Ecommerce uye Retail Email Kushambadzira & Email Kushambadzira Emerging Technology Chiitiko Kushambadzira Kushambadzira & Kutengesa Mavhidhiyo Kushambadzira Mabhuku Kushambadzira Zviitiko Kushambadzira Infographics Zvishandiso Zvekushambadzira Kushambadzira Kudzidziswa Martech Zone Apps YeMahara neThebhu Kushambadzira Public Relations Kugonesa Kugonesa Tsvaga Kutengesa Social Media Marketing
Muvhuro, July 5, 2021 Muvhuro, July 5, 2021 Max Sudyin
Dzakakwana nguva apo kuburitsa kwakakura zvemukati kwaive kwakakwana. Edhisheni zvikwata izvozvi zvinofanirwa kufunga nezve kugona kwavo kugovera, uye kusangana kwevateereri kunoita misoro yenyaya. Anogona sei midhiya app kuwana (uye chengeta) vashandisi vayo vanobatanidzwa? Ma metric ako anofananidzwa sei neindasitiri avhareji? Pushwoosh akaongorora push ziviso mishandirapamwe yemakumi mapfumbamwe nenhau dzinoshanda uye akagadzirira kukupa mhinduro. Ndeapi Akanyanya Kubatikana Midhiya Mapurogiramu? Kubva pane zvatakatarisa paPushwoosh,
Chipiri, June 29, 2021 Chipiri, June 29, 2021 Elena Teselko
Pasina mubvunzo kuti pesvedzero yemagariro enhau senge yekushambadzira chiteshi inowedzera gore rega rega. Mamwe mapuratifomu anomuka, akadai seTikTok, uye mamwe anoramba akafanana neFacebook, zvichitungamira kuchinjika inofambira mberi mukuita kwevatengi. Nekudaro, nemakore vanhu vajaira mabrand anounzwa pasocial media, saka vatengesi vanofanirwa kugadzira nzira nyowani dzekubudirira pane ino chiteshi. Ndosaka kuchengeta ziso pane zvazvino kuitika kwakakosha kune chero kushambadzira
Nzira Nhatu dzeKuona Kuti Yako Diki Screen Screen Kubatanidzwa kuri Kuva neKukuvadza Kwakakura
Chishanu, May 28, 2021 Chishanu, May 28, 2021 Juli Greenwood
Pasina mubvunzo denda rakachinja maitiro ekutenga kwevatengi uye zvinotarisirwa zvinotungamira vatengesi kuti vawane nzira nyowani uye dziri nani dzekuita online. Pamusoro pekuwedzera kwekushandisa pamhepo mu2020 - kukwira 44% kubva 2019 kusvika kumadhora zviuru mazana masere negumi neshanu muUS - kwave nekuwedzera kukuru mumasarudzo ekuzadzikiswa online, ne861% yevatengi vachitarisira kuwedzera mashandisiro avo eBuy-Online-Pickup -In-Store (BOPIS) uye curbside pickup uye 80% ikozvino yasarudza kuendesa kumba pane kushanya kwechitoro.
2Checkout: Scale Yako Kubhadhara Kugadziriswa Pasi Pose Kuti Uwedzere Mari
Kana iwe usati wambove nemukana wekubatanidza mubhadharo wekugadzirisa mhinduro, iwe uri mune rakanyanya ruzivo ruzivo Ma processor ekubhadhara ane akasiyana maficha uye zvipo ... kubva pamubhadharo, mari yako inobatwa kwenguva yakareba sei, kune ruzivo rwekushandisa pakubuda, rutsigiro rwepasirese, kudzivirira kubiridzira, pamwe nehunhu hwezvishandiso kwauri kuti utarise mari. 2Checkout ibasa-rebasa rekubhadhara iro rinowedzera shanduko dzekutengesa pamhepo nekupa mubhadharo wepasirese uine nzvimbo
MOLOCO Cloud: Dhata-Inotyairwa, AI-Inowaniswa Nhare Ad Ad Solutions yeMafoni Mapurogiramu
Chishanu, April 30, 2021 Chishanu, April 30, 2021 Douglas Karr
MOLOCO Cloud ndeye otomatiki yekutenga chikuva chekushambadzira kuwanda pasi rese rinotungamira kuchinjanisa kuchinjisa uye mu-app mashambadziro network. Izvozvi zvave kuwanikwa segore-rakavakirwa papuratifomu kune vese vashambadzi veapp, MOLOCO Cloud inofambiswa neyemidziyo michina yekufunda tekinoroji iyo inopa simba vashambadzi vefoni kuti vawedzere yekutanga-bato dhata uye mameseji ezviratidzo kubva kune ese echirongwa chirongwa ecosystem kugadzirisa otomatiki kushambadzira kunoenderana akasiyana siyana mashandiro ekuita. MOLOCO Cloud Zvimiro Zvinosanganisira Shanduko - svika nhare
UserTesting: On-Demand Yevanhu Ruzivo rwekuvandudza Iyo Yevatengi Chiitiko
Kushambadzira kwemazuva ano ndezve mutengi. Kuti ubudirire mumusika wevatengi-centric, makambani anofanirwa kutarisa pane chiitiko; ivo vanofanirwa kunzwira tsitsi uye nekuteerera kune vatengi mhinduro kuti varambe vachivandudza zviitiko zvavanogadzira uye zvavanounza. Makambani anogamuchira ruzivo rwevanhu uye vanowana mhinduro yehunhu kubva kune vatengi vavo (uye kwete kungoongorora data) vanokwanisa kuwirirana zvirinani nekubatana nevatengi vavo nevatengi munzira dzinonzwisisika. Kuunganidza munhu
Iyo Vaka Kupesana Nekutenga Dilemma: 7 Kufunga Kusarudza Izvo Zvakanaka Kune Rako Bhizinesi
Mubvunzo wekuti kuvaka kana kutenga software ndeyekuenderera mberi kuitirana nharo pakati pevanyanzvi vane akasiyana maonero pa internet. Sarudzo yekuvaka yako yemukati meimba software kana kutenga musika yakagadzirira mhinduro mhinduro inoramba ichichengeta vazhinji vevanosarudza vachivhiringidzika. Nayo SaaS musika iri kuwedzera kubwinya kwayo izere uko saizi yemusika inofungidzirwa kuti isvike USD 307.3 bhiriyoni na2026, zviri kuita kuti zvive nyore kuti mabhendi anyore kumasevhisi pasina chikonzero